भगवान शिवकाे कण्ठ (घाँटी) कसरी नीलो भयो ? - Mitho Khabar
June 29, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on भगवान शिवकाे कण्ठ (घाँटी) कसरी नीलो भयो ?
त्रिमूर्ति देवता मध्यमा संसारको संहारकर्ता महादेवको घाँटीको कण्ठ नीलो भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हिन्दु धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरूमा शिवको कण्ठ कसरी नीलो भयो भन्ने बारेमा थुप्रै कथाप्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
त्यसपछि, देवजातिहरू त्रीमूर्तिदेव भगवान् विष्णु भएको ठाउँमा गुहार्न गए र दानवलाई हराउनको लागि विशेष किसिमको कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने सल्लाह दिए ।
भगवान् विष्णुको सल्लाह अनुसार, देव र दानवहरूको बिच सम्झौता भयो र ‘अमृत’ (अमर गराउने जल) को लागि दुवै जाति मिलेर समुन्द्र मन्थन गर्ने अनि देव र दानव दुवैलाई अमृत बाँड्ने निर्णय भयो । तथापि, विष्णुले भने देवताहरूलाई मात्र अमृत दिने गोप्य वाचा गरे ।
बासुकीको मुखबाट निस्केको विषले कतिपय दानवहरूको मृत्यु भयो तैपनि देव र दानवहरू मिलेर बासुकीको शरीरलाई अगाडि पछाडि गर्न थाले, जसले मन्दरा पर्वत घुम्न थाल्यो र पर्वतले समुन्द्रलमथ्न थाल्यो । तर, समुन्द्रमा पर्वत डुब्दै गरेपछि, विष्णुले कछुवा ‘कुर्मा’को रूप धारण गरी आफ्नो ढाडमा पहाडलाई अड्याए ।
ब्रह्माण्डलाई बचाउनको लागि भगवान् शिवले उक्त विषलाई बटुलेर निल्नको लागि मुखमा राखे, तर उनकी पत्नी पार्वतीले विषको वास्तविक शक्तिलाई बुझी शिवको घाँटीमा अँठ्याइन्, ताकि शिवले त्यो विष निल्न नपाउन ।
यसरी उक्त विष शिवको कण्ठमा नै नीलो रङ्ग लिएर बस्यो । अनि भगवान् शिव ‘नीलकण्ठ’ नामले पनि पुकारिन थालेको कथा हिन्दु धर्म ग्रन्थमा भेटिन्छ ।
10 हजार बर्ष पुरानो मन्दिर जे माग्यो तेहि पुग्ने Om लेखेर 1 Share गर्नु-होस